‘प्रमुख पदमा काम गर्न सक्षम छु’ |
‘प्रमुख पदमा काम गर्न सक्षम छु’
प्रकाशित मिति :2017-05-03 08:00:36
पूर्व सभासद तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी पोलिटव्युरो सदस्य रेणु दाहाल आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेदवार हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी माइली छोरी समेत रहेकी रेणुसँग निर्वाचनको तयारी र चुनावी एजेण्डाबारे गरिएको कुराकानीको सारांश ।
मेयर पदको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । कत्तिको दौडधुप छ ?
निर्वाचन नजिकिँदै छ । अहिले दिनहुँजसो चुनावी प्रचारप्रसारको अभियानमा नै लागिरहेकी छु । दिनमा दर्जन बढी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकी छु ।
अहिले महिला प्रायः उपप्रमुखका दाबेदार देखिन्छन् । तपाइँ चाँहि किन प्रमुख पदमा उठ्नुभयो ?
महिलाले उप–पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने होइन । क्षमताको आधारमा प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक दिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा नै राखिएको छ । म प्रमुख या भनौं मेयर पदमा काम गर्न सक्षम छु । मेरो क्षमताको पार्टीले पनि मुल्याँकन गर्यो ।
प्रमुख पदमा पुरुष नआएकोले उठ्न पाउनुभएको त हैन ?
होइन । म पुरुष उम्मेदवार कोही भन्दा पनि कम छुइँन । त्यही भएर मैले आफूलाई महिला उम्मेदवारको हैसियतमा भन्दा पनि योग्य उम्मेदवारको रुपमा लिएकी छु । मसँग चुनाव लडेको, सभासद भएको तथा पार्टीभित्र तल्लोस्तरदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म काम गरेको अनुभव छ । यो पनि योग्यताभित्रै पर्छ ।
जित्ने अरु आधार के छन् त ?
मैले जित्ने आधार धेरै छन् । यो महानगरपालिकाका लगभग ३ वटा क्षेत्रमा ०६४ सालको संविधानसभामा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गरेको थियो । त्यो मेरो बलियो आधार हो । यतिखेर माओवादी केन्द्र एक भएको अवस्था पनि छ । त्यसमाथि म युवा हुँ, महिला हुँ । मसँग संविधानसभामा जनताको भावना अनुसार काम गरेकोे अनुभव पनि छ । र, अर्कोतर्फ यो म जन्मी, हुर्कि, पढेको ठाउँ पनि हो । मलाई चेलीका रुपमा आम मतदाताले माया गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी भएकैले टिकट पाएको भन्ने कुरा पनि उठ्छ नी ! के भन्नुहुन्छ ?
राजनीतिमा पारिवारिक लिगेसी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा र त्यसमा पनि दक्षिण एसियामा हावी नै छ । हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा हामी स्वीर्कादैनौं तर, त्यसो भन्दैमा नकरात्मक रुपले हेर्नुभएन । राजनीतिमा नआए पनि नकारात्मक टिपप्णी भने हाम्रोमा मात्रै हुने गरेको छ ।
हामीकहाँ नेताका छोरीको राजनीतिमा नलागी व्यापार, व्यवसाय, जागिर खाएपनि नकारात्मक टिपप्णी नै हुने गर्छ । राजनीतिमा आएपनि विरोध, नआएपनि विरोध हुने गरेको छ । यो राम्रो होइन । मैले द्वन्द्वकालमा पढाइ छोडेर, घरपरिवार छोडेर गरेको संर्घष, त्यसपछि केन्द्रमा सक्रिय भूमिकामा गरेको काम र योगदानको मूल्याँकन नगरी प्रधानमन्त्रीको छोरी भएकैले टिकट पाएको भन्नु तार्किक कुरा होइन् । मेरो आफ्नै पहिचान छ । म पार्टीको पोलिटव्युरो सदस्य हुँ । अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको केन्द्रीय महासचिव पनि हुँ । त्यो खालको हैसियतमा मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने, छुट्टै पहिचान बनाएर अगाडि बढ्ने तर, अवसर आउँदा जहिले पनि बुबासँग जोडेर मलाई ‘मिनीमाइज’ गर्न खोज्ने । यो त मलाई पनि अन्याय भयो ।
काठमाडौंमा यसअघि संसदीय निर्वाचन लडेको तपाई मेयर लड्न चितवन आउनु भएछ नी !
म यहाँको मतदाता हुँ । भरतपुर ४ मा नै मेरो नाम रहेको छ । मैलै अगाडि नै भनिँसके, म यहाँको छोरी हो । मैले अमर मावि पटिहानीमा पढेकी हुँ र त्यहिँबाट एसएलसी दिएँ । यी यावत कुराहरुका साथै मतदाताको राय सुझाव र पार्टीकै निर्णय अनुसार मैले मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएकी हुँ ।
तपाइँका चुनावी एजेन्डा कस्ता छन् ?
यो महानगरपालिकालाई सबै हिसाबले समृद्ध, हराभरा, सुन्दर, स्वच्छ र आधुनिक शहरको रुपमा अगाडि बढाउने सोच राखेका छौं । खास गरेर देशकै केन्द्रको रुपमा यो महानगर छ । यहाँ विकासका प्रचुर संभावना छन् । राजधानीपछिको दोस्रो केन्द्रको रुपमा यो महानगरपालिकालाई विकास गर्न सक्छौं ।
यहाँका प्रत्येक वडामा कुनै न कुनै हिसाबले विकासका मोडेल खडा गर्न हामीले सोचेका छौं । चेपाङ, गुरुङ होम’स्टे, सुकुम्बासी रहित वडा बनाउने, बालमैत्री वडा, गाउँ, नगर, टोलमा बालमैत्री पार्क बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेल मैदान बनाउने योजना छन् ।
शैक्षिक हिसाबले पनि यहाँ धेरै सम्भावनाहरु छन् । हामी विदेश गएर पढ्ने होइन, राजधानी पढ्न जाने होइन । विदेशीहरुलाई यहाँ नै पढ्न आउनसक्ने स्तरको अत्याधुनिक विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्ने ।
यो पर्यटनको पनि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । त्यसको लागि पनि लागिपर्ने छु । देवघाट हँुदै गोलाघाट सम्म जलयात्रा गर्ने, नारायणी नदीकिनारमा मनोरम पार्क बनाउने, निकुञ्जको वरपर जगंली जनावरलाई रोक्न तारजाली लगाउने, त्यहाँका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने लगायत छन् । त्यस्तै, बाहिरी र भित्री रिङरोड (चक्रपथ) बनाउनेछौं । यसले जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि ल्याउँछ, उत्पादनमा वृद्धि ल्याउँछ र पर्यटक भित्र्याउन बलियो र राम्रो सम्भावना बन्छ ।
महिलाका एजेन्डा पनि छन् ?
छन् । म आफू पनि महिला भएकोले महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकी छु । महिलाको कामको मुल्याँकन हाम्रो समाजमा त्यति हुन सकेको छैन । उनीहरुको आर्थिक स्तर उकास्न सहयोग पुग्ने खालका सिपमूलक, रोजगारमूलक कार्यक्रमहरु लागु गर्ने, विभिन्न खाले हिंसामा परेको अवस्थामा महिलालाई पुर्नस्थापना केन्द्रमा रहन सक्ने वातावरणका लागि पहल गर्ने, किशोरी शिक्षा, शिशु स्याहार केन्द्रमा जोड दिने तथा विभिन्न रोगबाट ग्रसित महिलालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन विशेष प्राथमिकतामा राख्ने लगायतका योजना छन् ।
(प्रस्तुतिः सृजना अर्याल)